Accueil > Gazetin'ny nosy > Hajo Andrianainarivelo: « Lozan’izay mbola miaraka amin’io fanjakana io »
Hajo Andrianainarivelo: « Lozan’izay mbola miaraka amin’io fanjakana io »
Tsy hiaraka amin’io fanjakana io izahay ato amin’ny MMM (Malagasy Miara-Miasa), na inona na inona no hataon’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Fanapotehina ny firenena no ataon’ny antoko HVM (Hery Vaovao hoan’i Madagasikara) hoy hatrany izy raha nihaona tamin’ny mpikambana tao amin’ny antoko MMM izay tarihiny izy tamin’ny sabotsy faha 27 janoary 2018, tetsy Ankerana raha nifampiharahaba tratrin’ny taona ity antoko ity.
Fotoana izay nifampidinihan’ny mpiray donakafo mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny politika misy ataon’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina sy ny HVM amin’izao fotoana izao no tena nibahan-toerana tamin’izany. Nifanome vaovao koa mahakasika ny làlana hodiavin’ny antoko ao ankaton’ny fifidianana izao. Tamin’izany no nilazan’ingahy Hajo Andrianainarivelo fa vonona ny antokony handray anjara amin’ny fifidianana rehetra izay hatao. Nisy ny fifanarahana izay natao tao amin’ny Armada izay vondron’antoko politika maromaro avy tamin’ny Tetezamita iny ka tapaka tamin’izany fa hanolotra olona tokana ity vondrona ity. Isan’ny nanao sonia izany ny MMM ka mbola mitazona ny teniny sy ny fifanarahana nosoniaviny tamin’izany izy hatramin’izao.
Mahakasika ny zava-misy eto amin’ny firenena indray dia nanambara ny MMM fa tsy misy fanarahan-dalàna intsony ataon’ingahy Hery Rajaonarimampianina izay filoham-pirenena hatramin’izao. Tsy noraharahany ny fananganana ny HCJ na ny fitsarana tampony izay hitsarana ny olona mpitondra firenena nandika lalàna. Izay voalaza fa tsy maintsy tanterahany iray taona aorian’ny nandraisany fanjakana. Ingahy Hery Rajaonarimampianina tokoa no isan’ireo nitety faritra maro tamin’ny taona 2010 nanao izao hampandaniana io lalàmpanorenana io. Tsy notanterahany koa ny rafitra izay mametraka ny antoko mpanohitra araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana hatrany. Mbola fandikan-dalàna koa ny mahakasika ny fanendrena ny lehiben’ny faritra amin’izao fotoana izao, satria olona fidiana no voalazan’ny lalàna no apetraka amin’izany fa tsy olom-boatendry.
Tena zava-doza tanteraka no mitranga ankehitriny eto amin’ny firenena. Nahoana hoy ingahy Hajo Andrianainarivelo no tsy avoaka ny lalàm-pifidianana?
Isan’ny notenenina tao amin’ity fifampiarahaban’ny MMM ity ny fisondrotry ny vidim-piainana amin’izao fotoana izao. Ny vary mihoatran’ny 2000 ar ny kg ary ny “euro” iray dia sandaina 4000ar amin’ny vola Malagasy.
Nanamarika ingahy Hajo Andrianainarivelo fa tsy hiaraka amin’io fanjakana io mihitsy izy ireo.
Nampitandrina izy mahakasika ny ben’ny tanàna ao Manandrina izay maty ka tokony ho soloina. Tsy azo ekena ny hanoloana azy ho PDS (prezidà ny delegasionina manokana) fa tsy maintsy fidiana ihany araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana no tokony hatao. Hifankahita eto raha izany no ataon’izy ireo araka ny feo amndeha ankehitriny hoy ihany ny MMM.